၊မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths – LXXXIII | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » ၊မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths – LXXXIII
၊မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths – LXXXIII
။ IFC ၊အိုင်အက်စီနဲ့အပေါင်းပါတို့ကမြစ်ဆုံရေကာတာဆက်မလုပ်ဖို့ရေးတာကို
High risk. ဟိုင်ရစ်၊အန္တရာယ်ကြီးတယ်ဆိုပြီး၊”၊ဝါးချ”၊နေတာပါ<
ဒါတွေကိုအသေးစိတ် ဂ ဃ ဏ န ၊ချေပပြီးပါပြီ(၊ရှေ့ဆောင်းပါးတွေကိုညွန်း)၊ ၊ဒါကြောင့်လဲIFC ၊အိုင်အက်စီကငလျင်ဟိုင်:ရစ်လား၊မြစ်ကောတဲ့ဟိုင်:ရစ်လား၊
High risk ၊ဟိုင်းရစ်၂လုံးထဲနဲ့အရိပ်အခြည်ဝါးချရုံဘဲ၊
High risk ၊ဟိုင်ရစ်စကား၂လုံးပါလို့တွက်ဆထားတယ်၊ဝန်ကြီးကအသာလေးခဏဘေးထိုင်ရတယ်၊
၊ဦးထွန်းလွင်က ၊ကောတယ်လို့ပြောတာက မမှန်၊
၊ဗဟုသုတ ရ ရအောင်၊စပ်လျဉ်းတဲ့ဗီဒီအိုသစ်တွေကိုထပ်မံပြီးတင်လိုက်ပါတယ်၊
၊ဒါကိုလာဘ်မမြင်၊ဘာလုပ်မှာလဲပြစ်ပြစ်ခါခါ ၊ခါချနေတာ ၊ဟားစရာဖြစ်မနေဖူးလား၊၊ဘယ်လိုပြောပါလိမ့်ပါရဂူလေးရယ်?﻿
၊ဒါကိုလာဘ်မမြင်၊ဘာလုပ်မှာလဲပြစ်ပြစ်ခါခါ ၊ခါချနေတာ ၊ဟားစရာဖြစ်မနေဖူးလား၊၊ဘယ်လိုပြောပါလိမ့်ပါရဂူလေးရယ်
၊. ၊ဘုန်းကြီးမိန့်ဆိုတဲ့. Death sentence၊သေဒဏ်ထက်များစွာသေချာတာပေါ့
သဘာဝပျက်စီးတာကဒေါ်လာသန်း၈၀ဝချက်ချင်းမဟုတ်ဥပမာ အနှစ်၁၀၊မှ ၃၀။
၊. ၊ခုမျက်မြင်လက်ငင်းတန်ဘိုးကဒေါ်လာ၂၀ဝ ၊၃၀ဝလောက်ပါဘဲ၊
၊(၊စေတနာ မပါ ၊ပါ၊ဂျောက်တွန်းနေတာ)
၊ လျှပ်စစ်သုံးကားကိုလျှပ်စစ်သွင်းနှုန်:က ၊ရှစ်ဆမြန်လာ
Tesla is buildingamassive factory in Shanghai, the first wholly foreign-owned car plant in China. WSJ’s Trefor Moss explains why it’s doing so even as U.S.-China trade tensions heat up. အမေရိကန်ကား. ။ Tesla”၊တယ်စလာ”ကတရုပ်နိုင်ငံရှန်ဟိုင်ဒေသမှာလာပြီး